Kitaabni mataduree “Amanuu Baattus Amantiin walbari” jedhuun qophaa’e eebbifame - NuuralHudaa
Kitaabni kun guyyaa kaleessaa galma magaalaa Asallaatti eebbifame. Sagantaa eebbaa irrattiis Ustaazootaafi keysummoonni iddoo garagaraa irraa dhufan, Akkasumas hawaasni Muslimaa magaalaa Asallaa bal’aanis irratti hirmaatanii jiru.
Qopheessaan kitaabichaa Ustaaz Xaahir Galatoo kitaaba kanaa ilaalchisee ‘Sababni ani kitaaba kanaaf maqaa (‘Amanuu Baattus Amantiin walbari’) jedhe moggaaseef, ilaalcha namoonni Islaamummaaf qaban irraa kan ka’e” jedhe
Akka Ustaaz Xaahir ibsetti “namoonni hedduun ilaalchi Islaamummaaf qaban kan dogongoraatti. Islaamummaa keessa seenanii waan hin hubatiniif ilaalcha garii hin qabaniif. Kun immoo namoota Islaamummaa ala jiran qofa osoo hin taane, namoota Islaamummaa keessa osoo jiran, Islaamummaa akka waan aadaa ykn maatii irraa dhaalaniitti hordofaniis ni ilaallata. Namoonni akkasii kun akka isaan Islaamummaan wal-baruu qaban gorsa” jedhe.
Qabiyyeen kitaabichaa guutumatti Islaamummaa kan wal-qabatu tahuus dubbate.
August 4, 2021 sa;aa 12:05 pm Update tahe